Turkey amachibidoro ụgbọ elu ndị si Bangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, na Sri Lanka kpọmkwem ụgbọelu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Bangladesh » Turkey amachibidoro ụgbọ elu ndị si Bangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, na Sri Lanka kpọmkwem ụgbọelu
Minista na-ahụ maka ime ime obodo nke Turkey wepụtara akara na-ekwupụta na mba ahụ kwụsịrị ụgbọ elu si Bangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, na Sri Lanka site na July 1 wee ruo mgbe ọkwa ọzọ.
Mba ụfọdụ gosipụtara mmụba na nso nso a n'ihi ụdị dị iche iche nke nje COVID-19.
Turkey kpebiri imechi ókèala ya maka ntinye ọ bụla gụnyere site na ala, ikuku, oké osimiri ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè si mba isii.
Ndị njem si mba ọzọ bịarute Turkey mgbe ha gafesịrị otu n'ime mba ndị ahụ ga-achọ ịnye nsonaazụ nyocha COVID-19 na-adịghị mma emere na 72 awa gara aga.
Ndị ọchịchị Turkey kwupụtara na Turkey na-akwụsị ụgbọ elu ndị sitere na mba isii na-agbanyeghị ụdị ọhụrụ dị iche iche nke nje virus COVID-19 na steeti ndị ahụ.
Ozi ahụ kwuru na usoro ọrịa a na mba ụfọdụ gosipụtara mmụba na nso nso a n'ihi ụdị ọhụrụ nke nje COVID-19.
N'ịgbaso ndụmọdụ ndụmọdụ nke Health, toro toro kpebiri imechi ókèala ya maka ntinye ọ bụla kpọmkwem gụnyere site na ala, ikuku, oké osimiri ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè si mba ndị a.
Ndị njem si mba ọzọ bịarute Turkey mgbe ha gafesịrị otu n'ime mba ndị ahụ na ụbọchị 14 gara aga ga-achọ ịnye nsonaazụ nyocha COVID-19 na-adịghị mma emere na 72 awa gara aga.
A ga-ekewapụkwa ha iche n'ebe ndị gọọmentị mpaghara ahụ kpebiri maka ụbọchị iri na anọ, na njedebe nke a ga-achọ ule na-adịghị mma otu oge ọzọ.
Ọ bụrụ na nsonaazụ nyocha dị mma, onye ọrịa ahụ ga-anọrọ onwe ya, nke ga-ejedebe nsonaazụ na-esote ụbọchị 14 na-esote.
Okirikiri ministri ahụ kwukwara na ndị njem ga-esite na UK, Iran, Egypt, na Singapore ga-achọ ịnweta nsonaazụ nyocha COVID-19 na-adịghị mma nke enwetara n'ime ụbọchị atọ gara aga.
Maka ndị njem bịarutere Turkey site na mba ndị ọzọ karịa Bangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, UK, Iran, Egypt na Singapore, ndị nwere ike inye akwụkwọ na-egosi ịhazi COVID-19 ogwu na ụbọchị 14 gara aga ma ọ bụ mgbake site na ọrịa COVID-19 na ọnwa isii gara aga agaghị achọ iji gosipụta nsonaazụ ule ma ọ bụ kewapụ ya iche.
Ihe nyocha nke COVID-19 na-adịghị mma emere na 72 awa gara aga tupu ị rute Turkey ma ọ bụ nyocha ngwa ngwa nke antigen na-eduzi n'ime kachasị 48 awa mgbe ha rutere ga-ezuru ndị na-enweghị ike inye akwụkwọ ahụ.